ဘုန်းကျော်: 12/01/2009 - 01/01/2010
စစ်အာဏာရှင်လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲအဆက်ဆက်မှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့မြန်မာ့သားကောင်းတွေကို မေ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ လူတွေဟာ ဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။
စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ရဲဘော်တွေဟာ တပြားတချပ်မှမရဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်တွေလှူဖို့ လုပ်နေကြတယ်..။ သေပေးကြပီးပြီ...။
ဒီလိုလူတွေကိုကို တန်ဖိုးမထားရင် ဘယ်ခွေးသတောင်းစားကို တန်ဖိုးထားရမလဲ။
လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ၊ လူတန်းစားတွေထဲမှာ ဖောက်ပြန်သူဆိုတာရှိစမြဲပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဘယ်တော့မှ သစ္စာဖောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။
တတိယနိုင်ငံတွေမှာ အဆီအနှစ် ပိတ်နေတဲ့လူတွေကတော့ ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ငပိရည်ကျိုတာထက်တောင် သူတို့အတွက် လွယ်သေးတယ်။
မှတ်ချက်...အေဘီရဲ့ မွေးနေ့ပွဲဓာတ်ပုံကို တွေ့ပြီးခံစားသည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, December 31, 2009
US Branch ကိုရအောင် ဖွဲ့သင့်တယ်။ ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲအတာအဆီးတွေ ရှိပါစေ..ဒီကိစ္စက Must လို့ပြောချင်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ပါတီဝင်ပေါင်း ၆၀ မက ရှိတော့ တကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လုပ်အဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ ဌာနချုပ်မှာက ၁၀ ဦးပဲရှိတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အာဏာသိမ်းလို့တောင်ရတယ်။ တင်ပြသင့်တာကိုလည်း တင်ပြပီးပြီ…ညှိလို့မရရင်တော့ တခြားနည်းလမ်းပေါ့။
တကယ်တမ်းပြောရရင် မန်းဒိတ်ပေးခံရတဲ့လေးဦးက လုပ်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းအားနည်းတယ်။ လုပ်ချင်တဲ့စိတ်လည်း တချို့ မရှိဘူး။ ဒါကို ကြည့်ရင် ဌာနချုပ်က စီမံခန့်ခွဲမှုက လေထဲတိုက်ဆောက်ချင်နေတယ်။ အမေရိကမှာမရှိတော့ သူလည်းသိပုံမရဘူး။ တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေက ယခုလက်ရှိ ဆူရှီလိပ်နေတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ တကယ်ဖြစ်ချင်၊ လုပ်ချင်၊ လုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ရမှာ။ အနည်းဆုံးတော့ ဘိုလို မွတ်နေအောင်တက်တဲ့အရည်အချင်း၊ ကိုယ့်ကားကိုယ်မောင်းနိုင်တဲ့အရည်အချင်း၊ စည်းရုံးရေးအားကောင်းတဲ့အရည်အချင်းတော့ ပြည့်စုံရမယ်။
အမေရိကမှာနေပြီး ဘိုလိုမတက်ရင်တော့ ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ကားမမောင်းတက်ရင်လည်း ခြေထောက်ကျိုးသလိုဖြစ်နေတော့ ဒီလူလည်း….အိုကြီးအိုမတွေလို စိတ်ပဲရှိပြီးကိုယ်မပါသလိုဖြစ်နေအုံးမယ်။ စည်းရုံးရေးအင်အားကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ…ကျနော့်လို ဘုနဲ့ဘောက် ပြောတက်တဲ့လူနဲ့ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ စည်းရုံးရေးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်အောင်မဖွဲ့နိုင်ရင်တော့ အမေရိကမှရှိနေတဲ့ လူတွေတော်တော်ညံ့တဲ့အထဲမှာပါနေပြီ။ ဆရာများသားသေတဲ့အဖြစ်မျိုးတော့မရောက်ကြတာကောင်းပါတယ်။
အခုကြည့် ပါတီဌာနခွဲတွေရှိတယ်။ ဂျပန်၊ မလေး၊ နော်ဝေ၊ အော်စီကတော့ ငကြောင်တွေနေတာဆိုတာ သုံးလို့မရဘူး။ အခုအမေရိက မှာလည်းရှိတယ်။ ဖွဲ့တော့ဖွဲ့တယ်။ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ တယ်လီဖုန်း၊ အီးမေးနဲ့အလုပ်လုပ်တာကလွဲရင် မတွေ့ရသလောက်ပဲ။ တနှစ်မှာတော့အနည်းဆုံးတခါတော့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်သင့်တယ်။ ဌာနခွဲလေးခုပေါင်းပြီး တခုခုတော့အောင်မြင်အောင် လုပ်လို့ရတယ်။ အခုဟာက NLD လိုသေခါနီးလူတွေလည်း မပါဘူး။ အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ဌာနခွဲမှာပါတဲ့လူတွေပဲ….ဖွဲ့ပြီးဘာမှမလုပ်ရင်တော့ အရင်ကတည်းက မဖွဲ့တာကောင်းတယ်။ နာမည်ပျက်တယ်။ တကယ်လို့ကိုယ်ဖွဲ့တာကို ဌာနချုပ်နဲ့ ညှိတာ အဆင်မပြေရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်တာ ခင်ဗျားတို့စောက်ပူပါလားလို့ပြောရတော့မယ်။
အော်စီမှာလည်း လူ့ဘောင်သစ် Branch ကိုဖွဲ့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်က တင်ပြဘူးတယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ အော်စီမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်း စောက်သုံးမကျဘူးလို့ပြောရမယ်။ နောင်ကျရင်တော့ ဖွဲ့မယ်။ ဖွဲ့ပြီးမှ ပါတီဌာနချုပ်ကို တင်ပြမယ်။ ကျုပ်တို့တော့ဖွဲ့ပြီးပီ။ ပါတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို တသွေမသိမ်း လိုက်နာမယ်။ ဒါကလွဲရင် ဌာနချုပ်က လှမ်းပြီး ရာထူးတိုးပေးတာကို လက်မခံဘူး။ ကိုယ့်ဒေသနဲ့ကိုယ်ပဲ။ ပါတီဌနချုပ်က မင်းတို့ဖွဲ့တာကို ငါတို့အသိအမှတ်မပြုဘူးပြောလာရင်လည်း ဂရုမစိုက်ဘူး။ သူတို့အသိအမှတ်ပြုမှ နိုင်ငံရေးလုပ်ရတာမှမဟုတ်တာ။ ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်သင့်တာကိုပြောတာ။ လက်တွေ့မရှိတဲ့ ဘ၀မှာနေရတာကို နားလည်ရင် ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးက အလိုအလျှောက်ပါတယ်။
ကျနော်လို့ပဲ၊ တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ လူ့ဘောင်သစ် Branch ဖွဲ့ချင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်။ သူတို့လည်း သူတို့ဒေသနဲ့ သင့်တော်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဖွဲ့ကြမယ်။ ဌာနချုပ်ရဲ မန်းဒိတ်နဲ့ ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှု တစ်ယောက်ယောက်သွားဖွဲ့ပေးမှ Branch ဖြစ်တာမကောင်းဘူး။ တကယ်လုပ်ရမှာက ကာယကံရှင်တွေပဲ။ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ Branch ဖွဲ့ပီး ပါတီဌာနချုပ်က လစာအလုံအလောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ Branch တွေက ဌာနချုပ်ကိုပြန်ပေးတာ…ဆိုတော့ Branch တွေက…ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်၊ စည်းရုံးရေးမှု၊ အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာတာကလွဲပြီး ကျန်တာဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ ဒီဟာတွေကလည်း ပါတီဝက်ဆိုက်မှာ ရှိပီးသား။ တက်ဖက်ရုံပဲ။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်လျှောက်ရင်း နိုင်ငံရေးလုပ်တာ၊ ပါတီဌာနခွဲဖွဲ့တာ တခုမှ မှားတာမရှိဘူး…ချ…။ Branch တခုဖွဲ့ဖို့အတွက် မန်ဘာတွေက ပါတီဝင် ဖြစ်စရာမလိုဘူး…။ ပါတီ စီစီလည်းဖြစ်စရာမလိုဘူး။ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူ ဘယ်သူမဆို Branch အဖွဲ့ဝင်၊ ပါတီစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်နိုင်တယ်။
အားပေးတယ်။ အမေရိကန် Branch ကို ဖြစ်အောင်သာ…ချ..။ ဘာမှ စိတ်ဓာတ်မလျှော့နဲ့။ မရရင် အာဏာသိမ်းမယ်။ ကိုယ်ထမင်းကိုယ်စားပီး ပါတီကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာ ဘယ်တော့မှမမှားဘူး။ မချစ်ရင် စကားတောင်မပြောဘူး…လေကုန်တယ်။ ဒါကို ခင်ဗျားတို့…နားလည်သင့်တယ်။ ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးပါတီကနေ၊ ဒုတိယအင်အားအသေးဆုံးပါတီဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုအောင်မိုးဇော်၊ ကိုခင်မောင်တင့် ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ရုပ်ရုပ်လုပ်ရင် ဖြုတ်ပစ်ရမယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုအသစ်တက်ဖို့ နောက်မှာ လူတွေတပုံကြီးတန်းစီနေတယ်။
ဒီအပတ်စနေနေ့မှာ တယ်လီကွန်းဖရက်စ်လုပ်မယ်...။ စိတ်ဝင်စားရင်လာတက်ပါ..။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်တက်ပီးနားထောင်တာ လူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်...။ လာတက်ရင်မှုးအောင်တော့ မသောက်နဲ့...။ စကားပြောကောင်းရုံဆို ရပီ..။ ခါးမှာလည်း ဒုတ်တွေဓားတွေထိုးဖို့ မမေ့နဲ့အုံး...။
အုံးနှောက်မရှိတဲ့ First Eleven ဂျာနယ်အယ်ဒီတာ
၂၀၁၀- ဟာ ဘိုးတော်ဘုရားလေးဘက်ထောက်တဲ့ခေတ်မဟုတ်ပါဘူး။ အကြိုက်ချင်း မတူပါဘူး။
မော်ဒယ်တွေဖက်ရှင်ပြပွဲမှာ ၀တ်တာဟာ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်တယ် ပေါ့..ဟတ်လား ..ဟား..ဟား…။ ဒီ…ငပေါ အယ်ဒီတာ မကြည့်ချင်ရင် မျက်စိမှိတ်ပေါ့..။ ကိုယ်ကလည်းကြည့်သေးတယ်။ ပီးတော့ ကဲ့ရဲ့ သေးတယ်။ ဂျာနယ်မှာတောင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရေးလိုက်သေးတယ်။
မြန်မာပြည်ကမော်ဒယ်တွေ ၀တ်စားဆင်ရင်တာ ပြည်ပက မော်ဒယ်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဆီနဲ့ရေလိုပေါ့။ သိမှာပါ။ မြန်မာမော်ဒယ်မ တွေဟာ လမ်းပေါ်မှာ အတွင်းခံ၊ ဘလာစီယာ နဲ့ ဟန်ရေးပြနေတာမှမဟုတ်တာ။ အလားတူ မြန်မာမိန်းခလေတွေ ပေါင်သား၊ ဗိုက်သားပေါ်တာ ဘာဖြစ်လဲ။ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်နေတာမှမဟုတ်တာ။ ဒါမျိုးလေးတွေရှိမှလည်း မြန်မာယောက်ျားတွေ Fresh ဖြစ်တော့မှာပေါ့။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို နေရာတခါမှာ မြန်မာမိန်းခလေးတွေ ထိမ်းသိမ်းစရာမလိုပါဘူး။ သူတို့ကြိုက်တဲ့ အ၀တ်အစားကို၊ သူတို့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ပီးဝတ်တာ ခင်ဗျား..စောက်ပူပါလို့လား။ ခင်ဗျားငွေနဲ့ သူတို့ဝယ်တာမှ မဟုတ်တာ။ ရေးစရာမရှိ ကြံဖန်ပြီးရေးတယ်။ တခြားသတင်းရေးစမ်းပါဗျာ..။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ မြန်မာမော်ဒယ်တွေဝတ်တာစားတာ၊ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ရင် လိုတောင်လိုသေးတယ်။ မြန်မာမိန်းခလေးတွေဆိုတာ တချိန်လုံး ရင်ဖုံးနဲ့ နေရမှားလား။ မော်ဒယ်ရှိုးပွဲကို အမြဲတမ်း ဘီးစပတ်နဲ့ လျှောက်ရမှာလား အယ်ဒီတာမင်းခင်ဗျား..။ အခုရောက်နေတဲ့ခေတ်က ၂၀၁၀ ပါ…အယ်ဒီတာမင်း။ ထူးထူးခြားခြား မြန်မာမော်ဒယ်တွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတောင် လုပ်အုံးမယ်။ဘိုးတော်ဘုရားလေး ဘက်ထောက်တဲ့ ခေတ်မဟုတ်ပါဘူး။
နအဖအလိုကျတချိန်လုံး လျှောက်ရေး၊ လျှောက်ပြော မနေပါနဲ့တော့။
နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်လို့…။
သူတို့သားသမီးတွေကို အရင်ကြည့်ပါ…အယ်ဒီတာမင်း။ ပြည်တွင်းဖြစ်အ၀တ်အစားကို သူတို့သားသမီးများ ၀တ်ကြပါသလား။ အယ်ဒီတာမင်းရဲ့ သားသမီးများကိုယ်တိုင် အမြဲတမ်း ရင်ဖုံးနဲ့ ထမိန်ဝတ်ပြီး ပွဲလမ်းသဘင် သွားကြပါသလား။
မော်ဒယ်တွေ အ၀တ်အစားဝတ်တာဟာ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် အန္တရာယ်မဟုတ်ပါဘူး။
အဓိကအန္တရာယ်ကတော့ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင်စီဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုမရှိအောင်၊ ဘာသာရေးလိုလို ယဉ်ကျေးမှုလိုလိုနဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား တွေဖြစ် အောင် ၀ါဒဖြန့်မှုသက်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ဒါတွေ ဟာ ခေတ်နဲ့အညီဖြစ်လာတာပါ။
တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ အန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူး၊ အန္တရာယ်ဖြစ်နေတာက နအဖ ပဲဖြစ်ပါသည်။
အုံးနှောက်မရှိတဲ့အယ်ဒီတာမင်းတစ်ယောက်…ပေါက်ကရတွေ၊ ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါစေ။
မြန်မာမိန်းခလေးတွေ ယခုထက်ပိုမို ခေတ်မှီတိုးတက်နိုင်ပါစေ…။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, December 28, 2009
အကိုတို့က တူကိုမတူတာပါ ညီမလေးရယ်
ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၉
ဆရာသက်ခိုင်ရဲ့ ကဗျာကို ကျနော်တော့ ဒီအတိုင်းပြန်ခံစားတယ်။
အကိုတို့က ထူကိုထူနေ့လို့ပါ ညီမလေးရယ်
အမေရိက ပါတီ ဌာနခွဲကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးဒီလိုပြောချင်တယ်
ကြားရတဲ့သတင်းက ဌာနချုပ်က မန်းဒိတ်ပေးထားတဲ့ လူတွေကမလုပ်နိုင်တော့၊ လုပ်ချင်တဲ့သူတွေပြန်စုပြီး လုပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ ဌာနချုပ်ကိုတင်ပြကြတယ်။ ဌာနချုပ်က မန်းဒိတ်ပေးထားတဲ့ လူတွေကလွဲရင် တခြားဘယ်သူကိုမှ မယုံတော့ ခွင့်မပြုဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ဒီလိုပါ။
၁) စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာ ပါတီဌာနခွဲဖွဲ့မှ ဆန့်ကျင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။
၂) ဌာနခွဲ ဖွဲ့ပြီးအလုပ်မလုပ်တဲ့လူတွေ တပုံကြီးပါ။ ဌာနခွဲမဖွဲ့ပဲ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နေတဲ့ လူတွေအောလပုံရှိတယ်။
၃) ဌာနချုပ်က ဘယ်လိုပဲမန်းဒိတ်ပေးပေး၊ မပေးပေး ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်တာကောင်းတယ်။
၄) လုပ်တောင်မလုပ်ကသေးဘူး နေရာလေးယူချင်လို့ ဌာနခွဲပြန်ဖွဲ့မယ်။ ပြီးရင် တာဝန်ခံ၊ လုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့၊ ဒု-တာဝန်ခံလုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့ ရာထူးလေးက လိုချင်သေးတယ်။ ဒီလိုမျိုး ခေတ်မရှိတော့ဘူး။ တကယ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရင် ဘာဌာနခွဲကိုမှ ဖွဲ့စရာမလိုဘူး။ လုပ်လို့ရတယ်။
၅) ဌာနချုပ်ကလဲ ကပ်စေးနည်းတယ်။ မလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကို မန်းဒိတ်ပေးတော့ ဘာရမှာလဲ။ လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေကို မန်းဒိတ်ပေးပေါ့။ မန်းဒိတ်ပေးရတာ ပါတီတခုလုံးရစရာမရှိအောင် မီးလောင်သွားတာမှမဟုတ်တာ။ စီအီးစီ၊ စီစီမှ ဆိုတဲ့ ခေတ်မဟုတ်တာတော့ သတိထားရမယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, December 25, 2009
ခရစ်မတ်။ ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ခရာစ်ယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ပဲဆိုပီး ခပ်ကင်းကင်းနေခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ သူများပျော်တော့လည်း ကိုယ်လည်းလိုက်ပျော်ပေါ့ဗျာ...။ ဒါလည်း အုပ်ပျော်တမျိုးပဲ။
ဒီအချိန်ဆိုရင် သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ နှင်းတွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေလောက်ပီ။ မြန်မာပြည်မှာအေးနေလောက်ပီ။ ဒါပေမဲ့ သြစတျေးလျနိုင်ငံ မှာတော့တမျိုးပါ။
စောက်ရမ်းပူတယ်။ အပူချိန် ၃၅ အနည်းဆုံး။ အပြင်တောင်မထွက်ရဲဘူး။ ထွက်တာနဲ့ အမဲသားနေလှန်းသလိုပဲ။ လေကလည်း စောက်ရမ်းတိုက်။ ယခုနှစ်ရာသီဥတုက အရင်နှစ်တွေနဲ့လုံးဝမတူဘူး။ ပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့။ အရင်းရှင်တွေကြောင့်(သို့) ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာတာကို လူသားတွေအားလုံးခံစားနေရတယ်။ ချမ်းသာတော့ လူတစ်စုပဲ။ ဒါ မတရားဘူး။
အခုလို ခရစ်မက်ပြီးရင် ၂၀၁၀-ကူးတော့မယ်။ ၂၀၁၀-မှာ ဘာတွေအပြောင်းအလဲရှိဦးမလဲမသိဘူး။ ၂၀၁၀-မကူးခင် ခရစ်မက်ညလေးမှာ ချီးကျတဲ့ သူငယ်ချင်းတစုနဲ့ ဒီလိုမျိုးသီချင်းတွေတောင် ဆိုလိုက်ချင်သေးတယ်။
" ကြည်ကြည်လင်လင်... ချမ်းအေးလှတဲ့၊ ည..ဒီအချိန်ခါ..ကိုယ်တော်ရှင်ဟာ မီးပုံဘေးမှာ ကွေးနေတာ...ချစ်ဆွေရယ် စန္ဒယားကို တီပါတယ်...."
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဆိုဖို့အခွင့်အရေးကျနော့်မှာမရှိတော့ပါဘူး..။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ချမ်းအေးလှတဲ့ ည..တွေအစား...ပူလောင်နေတဲ့ ညတွေကို ခရစ်မက်ကာလမှာ တွေ့နေရပြီလေ...။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်ပါ။ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကာကွယ်ပါ။ ကွန်ဒုံသုံးပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, December 24, 2009
အကျဉ်းကျခံနေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်မျက်စိရှေ့ မှာ လူထုခေါင်းဆောင်တွေ ပြည်သူကို စားဝတ်နေရေးပြေလည်အောင်၊ တိုင်းပြည်ကြီးပွားတိုးတက်အောင် ဘယ်သူမှလက်တွေ့ အကောင် အထည်မဖော်နိုင်သေးလို့ပါ။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစုကတော့လက်တွေ့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့အရည်အချင်းကို သူတို့ပြပီးပြီ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို ကျနော်တို့လက်တွေ့မမြင်ရသေးဘူး။ ဒီအထဲမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဒေါ်စု၊ ကိုမင်းကိုနိုင် စတဲ့ လူတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒီလိုတွေးမိတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်းက ၁၀-နှစ်ကျော်ပါတယ်။ သူမအသက်လည်း ၆၀ နားကပ်နေပါပြီ…။ တပ်ထဲမှာလို ၆၀ ကျော်ရင် ပင်စင်ပေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒေါ်စုလည်းမကြာခင် ပင်စင်သွားခါနီးပြီ။ အကျယ်ချုပ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ပလောကနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒေါ်စုအာဏာရရင်တောင် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးမိပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံက ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့  တော့ရှိမှာပေါ့လေ။
ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ အခြားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ
သူတို့လည်းဒေါ်စုထက်အခြေအနေဆိုးတယ်။ ပညာက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကပေးတဲ့ ပညာတပိုင်းတစပဲရှိတယ်။ ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်နီးပါး အကျဉ်းကျခံနေရတယ်။ ထောင်ထဲက ပညာပဲရှိနိုင်တယ်။ အတွေ့အကြုံ လည်းမရှိ။ ပြည်ပအတွေ့အကြုံ။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိပါ့မလား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ရာအရည်အသွေးတွေကော ပြည့်မှီရဲ့ လား။ ဆိုလိုတာက စိတ်ရောဂါလိုဟာမျိုးတွေပါ။
ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်၊ အရည်အချင်းရှိရှိ လုပ်နိုင်ပါသလဲ တွေးကြည့်ရအောင်ပါ။
တချို့ ခေါင်းဆောင်တွေက တော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်တက်တယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တက်တယ်။ ဆိုလိုတာက တိုက်တက်တယ်။
တချို့ တွေက နှစ်မျိုးစလုံးမှာအရည်အချင်းပြည့်တယ်။
ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ လက်တွေ့တိုင်းပြည်မှာ သူတို့လက်ထဲအာဏာရရင်တောင် တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကို တိုးတက်ကြီးပွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါ့မလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အာဏာမရတာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါရှိပြီဆိုတော့ လက်တွေ့အတွေ့အကြုံနဲ့ အရည်အချင်း မရှိကြတော့ပါဘူး။
အဓိကပြသနာက ပြည်သူကို စားဝတ်နေရေး ကိစ္စတွေ ပူပန်စရာမရှိအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရည်အချင်း၊ တကယ်လုပ်ပေးတက်တဲ့အရည်အချင်း၊ ဒါတွေကို ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေ အာဏာရရင်တောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါ့မလား။
တွေးကြည့်တာပါ။ ကျနော့် ယုံကြည်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့ဘ၀တွေကိုဘယ်သူကိုမှ ယုံပြီး ပုံမအပ်သင့် ကြောင်းပါ။ အားလုံးကို သံသယနဲ့စောင့်ကြည့်တာပဲကောင်းပါတယ်။
ယခုခေတ်ယူဂျီသမားသည်၊ ယူဖို့အတွက်ဂျီကျမည်၊ ဂျီကျပြီးထပ်ယူမည်
ဗိုက်ကြီးပူအဖွဲ့(ဗကပ) အဖွဲ့ ကစသည်။
၂၀၀၉-ခုနှစ် IT ယူဂျီသမားဖြစ်ရေးအထိ လက်တွဲခေါ်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ဆိုလည်းမမှား။ ဟိုတုန်းကတော့ မသိဘူး။ စိတ်လည်းမ၀င်စားဘူး။ ယူဂျီဆိုတာဘာလဲ။ မြေအောက်ဆိုတာဘာလဲ။ တခုပဲအတွေးထဲမှာရှိတယ်။ မြေအောက်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့ လူတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာ။ နအဖ လက်အောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘ၀။
ယူဂျီသမားတွေနဲ့စကားပြောဖြစ်တော့ တချို့ သတိထားမိတယ်..။
“သူတို့ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေးလဲခင်ဗျ” လို့ မေးမိတယ်။
NLD ပြည်တွင်းက ယူဂျီသမားပြောတာက-
“သူတို့(နယ်စပ်) ခိုင်းတာပေါ့ဗျာ..ဟိုလူနဲ့သွားတော့..ဒီလူနဲ့သွားတွေ့ ။ ပြီးရင် နယ်စပ်ပြန် သတင်း ပို့…အီး မေးပို့ပေါ့တဲ့..ဂျီတော့နဲ့ပိုမိုက်တယ်”
“ဒါနဲ့..ခင်ဗျား ပြည်တွင်းမိသားစုထမင်းစားဖို့ ဘာအလုပ်လုပ်လဲဗျ…” လို့ ထပ်ပီး စုံစမ်းတော့…
ဟိုက်ရှာပါး...သူပြောမှ ပိုရှင်းတယ်...။ ကောင်းပါ့ဗျာ..။
သူက ယူဂျီလုပ်စားတယ်။ နယ်စပ်က တချို့ ကလည်း ယူဂျီလုပ်စားတယ်..။ ယူဂျီကို ယူသုံးလိုသဘောထားတယ်။ ဒါမှ နယ်စပ်လည်း ဗကပ(ဗိုက်ကြီးပူ) ဖြစ်တာပေါ့။
ဂျပန်ခေတ်ယူဂျီက ဒေါ်လာမစားဘူး။ ၂၀၀၉-ခုနှစ် ဂျီတော့ယူဂျီက ဒေါ်လာနဲ့ အသက်မွေးတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, December 22, 2009
ကိုညီညီအောင်ရဲ့ ဘောကို မသင့်သူများ
Free Burma's Political Prisoners ကမ်ပိန်းလုပ်တာကောင်းတယ်...AAPP ဒါပေမဲ့ ဒေါ်လာများများရအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေရင် ငရဲကြီးမယ်
ကိုညီညီအောင်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီစာကိုရေးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်က တကယ့်ကို လေးစားအတု ယူဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ အဖမ်းခံမှာကို သိသိနဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဂျင်ဝက်များထပ်ပြီး ကယ်ထုတ်လေ မလား ဆိုတဲ့ အတွေးများရှိရင်လည်း ရှိမှာပါ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့လုပ်ရပ်မှန်လေစွ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကြွတက်လှုပ်ရှားသူတွေ သောင်းကျော်ရှိတယ်။ အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းစုံက လူတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းကြွားဟောင်းတွေ၊ စသဖြင့် တပုံကြီး ရိုက်သက်လို့ မကုန်အောင်များတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်တဲ့ တောင်ကျော်၊ တောင်ဖြတ်တွေလည်း တထောကြီး။ ABSDF နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းတွေ တလှေကြီး။ သူတို့အများစုက ကိုညီညီအောင်လို အမေရိန်ကန်နိုင်ငံ သားဖြစ်ကုန်ကြပီ။ Australia မှာလည်း ဒီလိုလူတွေ အိမ်ဝယ်ပြီး၊ သူတို့အမျိုးတွေကို ကန့်ထဲဝင်၊ ပြီးရင် Australia နိုင်ငံရောက်အောင်လုပ်ပေးနေကြတယ်။
အင်တာနက်၊ ဘလော့ဂ်၊ ရေဒီယို၊ အွန်လိုင်းတွေမှာ သူတို့သည်လေပေးကြသည်။ အရက်ဝိုင်းမှာ ငြင်းခုံကြသည်။ လူများရင် ငါ…ဆိုတာ ဘာကောင်လည်းထုတ်ပြောသည်။ ငါ..အရင်တုန်းက ခွေးအိပ်တောင်တိုက်ပွဲ၊ မာနယ်ပလောမှာ ဘယ်လိုမျိုး ပြေးခဲ့ရတယ်။ စတဲ့ လေ..တွေ တံတွေးကုန်အောင်ပြောသည်။ တခြားသူတွေဟာ သူ့တို့လောက် မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ စောက်ရှက်မရှိပြောသည်။ မတူမတန်သလိုဆက်ဆံတယ်။ ပြိုင်စရာမရှိ ကြံဖန်ပြိုင်တယ်။
အခုတော့…ကိုညီညီအောင်လို..ပြည်တွင်းကို လေယျာဉ်စီးပြီး အမေရိကန်၊ သြစတျေးလျက လူတွေ သွားကြပါလား။ တစ်ယောက်ပီး၊ တစ်ယောက် သွားရင် အမေရိကန်နဲ့ သြစီလည်း မနေသာတော့ဘူးပေါ့။ ဘာ့ကြောင့် အဲလိုတိုက်တွန်းရလဲဆိုတော့ ABSDF၊ ၈၈ မျိုးဆက်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ NLD စတဲ့လူတွေဟာ လေစိမ်းမတိုက်ပဲ..တကယ်လုပ်ကြရင်ကောင်းပါ့ဗျာ…။ အင်တာနက်မှာ လေပေးနေတာလောက်တော့ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုညီညီအောင်လို သတ္တိရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး ရှားတယ်။ အခုဆိုရင် စစ်ခွေးတိုက်မှာ တစ်ယောက်ထဲ..အင်တာနက်လည်းမရ၊ ဘလော့ဂ်လည်းမရေးနိုင်၊ ဘီယာလည်းမချနိုင်…။ စစ်ခွေးကိုက်တာ၊ ဟောင်တာကို ချောင်ပိတ်ခံရဲတဲ့ သတ္တိ။ ဒါကိုလေးစားတယ်။ အမေရိကန်ကနေ အင်းစိန်ထောင်ထဲကို တစ်ယောက်တည်းသွားရဲတယ်။
သူ့လိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံဖွား၊ Australia နဲ့ US နိုင်ငံသားတွေ သွားရဲတဲ့ သတ္တိရှိလား။ ကျနော်အပါအ၀င် No လို့ဖြေရတော့မယ်။ သံရုံးရှေ့ မှာ ဆန္ဒပြတာ၊ ဟိုအရှေ့ မှာ၊ ဒီအရှေ့မှာလှန်ပြ..တာသတ္တိမဟုတ်ဘူး၊ စွန့်လွှတ်မှု့ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်း ဒုက္ခခံ ဆင်းရဲခံရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်သာလျှင် လေးစားဖွယ်ကောင်းတယ်။ ဒါကိုကိုညီညီအောင်အခုလက်တွေ့လုပ်ပြနေတယ်။ အမေရိကန်က တော်လှန်ရေးသမားကြီးတွေ၊ သြစတျေးလျနိုင်ငံကတော်လှန်ရေးသမားဟောင်း ကြီးတွေ ကိုညီညီအောင် ခြေဖျားတောင်လိုက်မမှီဘူးလို့ပြောရတော့မယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်ဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံသား၊ သြစတျေးလျနိုင်ငံသား လွှတ်တော်အမတ်ကြီးတွေ၊ ပညာရှင်ကြီးတွေ ကိုညီညီအောင် ရဲ့ ဘောကို ခဏခဏ..မသင့်တယ်။
နောက်ပီး ပြည်ပနဲ့ နယ်စပ်လူ့ဘောင်သစ်ပါတီက လူတွေ......စသဖြင့်....။
ဒေါက်တာ သန်းထွန်းက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် ရခိုင်ဘက်က ဆင်ဖြူတစ်ကောင် ရတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အခုလိုပြောပါတယ်။ ဆင်ဟာ...မဲမဲ ဖြူဖြူ Animal ပဲ။ ဒါကို ကိုးကွယ်တဲ့သူဟာ Animal ကို ကိုးကွယ်တာပါပဲ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သင်္ကေတကိုကြည့်ပါ။ ခွပ်ဒေါင်း၊ ကဒေါင်း သုံးကြတာများတယ်။ အသေခံခွပ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုသဘောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ Animal ကို၊ လူတွေထက်ပိုလေးစား၊ အတုခိုးနေတယ်။ ဒါဟာ Animal ကို ကိုးကွယ်တာပါ။ တခြားသင်္ကတ ရှာဘို့ မကြိုးစားတာလား။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ခြင်္သေ့ ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါလည်း အုံးနှောက်မရှိ၊ စကားမတက်တဲ့ Animal ပဲ။ ဒါ...ကိုးကွယ်တာဟာ ကြမ်းတမ်းရင့်ရော်တာကို အတုခိုးတာလား။
ကိုမိုးသီးဇွန် ဘလော့ဂ်မှာလည်း We are Lions လို့ရေးထားတယ်။ သူတို့လည်း Animal ကို အားကြ၊ အတုခိုး၊ Animal လုပ်သလို လုပ်ကြတော့မယ်ထင်တယ်။
တခြား Options ကိုမြန်မာတွေရွေးသင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် လူ..ကို အားကြတဲ့ ဂုဏ်ယူစိတ်ပေါ့။
Australia နဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေက သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတကို Kangaroo နဲ့ ကီဝီ ကိုသုံးတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီ Animal တွေက တခြားနိုင်ငံမှာ မရှိတဲ့ Native Animal ဖြစ်တယ်။ သူတို့ တိုင်းပြည်မှာပဲရှိတယ်။ ဒါ...ကို ဂုဏ်ပြုတယ်။ ဒီ Animal တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ လုပ်ဟန်ကို Australia နိုင်ငံသားတွေ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားတွေအတု မခိုးကြဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ Animal က လူလောက်အသိညာဏ်မရှိလို့တဲ့ဗျာ.....။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, December 21, 2009
ခင်ဗျားရဲ့ ၊ စိန်တွေ၊ ရွှေတွေကို ချွတ်ထားခဲ့ပါ
မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခါကြီးနေ့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ရေလောင်းပွဲ၊ ကထိန်ပွဲ စတဲ့နေ့တွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ စည်စည်ကားကား လုပ်တယ်။ စားကြပွားကြ။
ပျော်စရာပါ။ သတင်းတွေဖလှယ်ရင်း၊ အတင်းတွေလည်းပွားကြပါ။ဒီလို ဘာသာရေးနေ့ကြီး ရက်ကြီးတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဘာ့ကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို လူတွေအကြမ်းဖျင်းနားလည်မှာပါ။
ဒါပေမဲ့ လူတချို့  (သို့) အများစု အကြွားထူတယ်။ ဒီလိုပွဲမျိုးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထုတ်ကြွားတယ်။ လည်ပင်းက ရွှေ၊ လက်က စိန်လက်စွပ်၊ ကားက သိန်းကျော်တန်၊ သားက ဘာဖြစ်တယ်၊ ငါ့ အိမ်က ဘယ်လောက်တန်တယ်.....စသဖြင့် ပါးစပ်က ထုတ်မပြောပေမဲ့...ဒီလိုမျိုးရှိတယ်။ အော်စီက မြန်မာတွေ ရဲ့  ဘ၀ အခြေအနေ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ တွေ့ရတဲ့အခြေအနေ။
စနေအသင်း။ ခရာစ်ယန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ကျောင်း ကိုရောက်တော့ တညီတညာတည်း မြန်မာပြည်က ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မွန် စတဲ့ လူတွေဝတ်ပြုဆုတောင်းနေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့  ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းကိုလာချင်ရင် ဒီလိုမျိုးစည်းကမ်းတွေလိုက်နာရတယ်။
၁) မိမိ ကိုယ်ခန္ဒာမှာ ၀တ်ထားတဲ့ ရတနာရွှေငွေတွေကို ဘုရားကျောင်းလာရင် ချွတ်ထားခဲ့ပါ။
Perth က မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ မြန်မာပြည်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုလာတဲ့ လူတွေ မိမိရတနာ၊ လက်ဝတ်လက်စားတွေကို ချွတ်ထားကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, December 20, 2009
လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးလို့ရတယ်လို့ ဆိုပြီး...တကယ်တန်းဆွေးနွေးဖို့ သူတို့ပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်တော့ တလွဲ။ သူတို့ ကြိုက်ရာ ဆွေးနွေးစေတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆-ရက်နေ့အစီအစဉ်းမှုးနဲ့တကွ အားလုံးဟာ နအဖ လိုပဲ ကိုယ်ကြိုက်ရာ ခေါ်စေတယ်။ ဘာလဲကွ ဘီဘီစီ။
တခါမှမလုပ်ဘူးလို့ စမ်းကြည့်တယ်...။ အခုတော့ တွေ့ပါပြီ...။
ငါးခါမက ခေါ်တယ်။ ဆွေးနွေးပွဲသာပီးသွားတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ခွင့်မပြုဘူး။ သူတို့အကြိုက်လုပ်စေတယ်။ ကြေငြာတုံးက တိုက်ရိုက်ဆိုပီး။ အခုတော့ စောက်တလွဲ။ သူတို့တင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မေးတာက တခြားစီ။
စောက်ရူးတွေ။ စတာလင်ပေါင်တစ်ရက်စာ ရဖို့လောက် စဉ်းစားနေလားမသိဘူး။ ကိုရင်မောင်အသံ လည်းကြားရတယ်။
ခေါင်းစဉ်က...ဗိုလ်ချုပ်တွေထားစရာမရှိချမ်းသာတယ်။ အောက်ခြေတွေငတ်နေတယ်။ ဒါကို ဆွေးနွေးတာ။ တကယ်တမ်းလုပ်တော့ တလွဲ။
2009 .ဒီဇင်ဘာလ ၁၆-ရက်နေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်ကိုပြောတာပါ။
အစီအစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကိုဦးဆောင်သူတွေကို အထူးသဖြင့် ဆဲတယ်။ အချိန်ကုန်ခံပြီးစောင့်တာ အလကားပဲ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, December 16, 2009
လူတွေ..လူတွေ...ဘာတွေလဲ..။ မသေခင်မှာတော့ ချီးကျူးဖို့ မရှိ..။ ကဲ့ရဲ့ ဖို့သိတယ်။
အခုဆရာကြီး အီကြာကွေးသေတော့မှ အင်တာနက်မှာ ဂုဏ်ပြုတယ်..။ ဘာ့ကြောင့်များမသေခင်တုံးက သူအားရှိအောင် မချီးကျူး၊ မရေးကြလဲ။ သေတော့မှရေးတော့ ဘာအကျိူးရှိမှာလဲ...။ ပေါက်ကရ လူတွေ..။ စောက်သုံးမကျတဲ့လူတွေ။ တချို့ ကိုပြောတာပါ။
မသေခင်မှာပြော..။ ချီးကျူး..ရေး..။ ဒါဆိုရင် လိုရင်းကိုထိရောက်တယ်။
သေသွားရင် သူ့အုတ်ဂူကို နှစ်ရှည်ခံအောင် လုပ်ပေး..။ ဒီလောက်ဆိုရင် သေတဲ့လူအတွက် လုံလောက်ပီ..။
ဒေါ်စု၊ ဦးအောင်ရွှေ၊ အဘဦးဝင်းတင်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုမိုးသီး၊ စတဲ့လူတွေလူတွေ..လာမယ်။ သေလိမ့်မယ်။ အခုကတည်းက သူတို့အတွက် ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်တယ်။
သေတော့မှ ချီးကျူးတယ်ဆိုတာ စောက်ရှုးတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲ..။
Song for Burma
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို ဖန်တီးသူကတော့ ကိုကျော်ခင်လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Perth မှာ အခြေချတာ နှစ်ပေါင်း ၃၆-နှစ်ရှိပါပြီ။ အသက် ၅၅-မှာ ခလေးတွေနဲ့အတူ Edit Cowan Uni မှာ ဒသနိက ဘာသာနဲ့ဘွဲ့ရပါတယ်။ ကိုကျော်ခင်ဟာ...တခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဇန်န၀ါရီလ လေးရက်နေ့မှာ သမိုင်းဝင် လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းကိုဖတ်ခဲ့တဲ့ ဦးခင်ရဲ့ သား ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားကြည့်ကြပါကုန်..။
မြန်မာစာ၊စကား၊ အစားအစာကို အရမ်းကိုမက်မောလွန်းလို့..ကိုကျော်ခင်အစား...ကိုမြန်မာခင်....လို့ပေးရပါမယ်။ သူ့ဆီမှာ ထူးခြားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၃၆-နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာလယ်ကတုံး၊ ရခိုင်ပုဆိုးနဲ့၊ ပုသိမ်ထီးလည်းရှိပါတယ်။ Perth မှာစတင်အခြေချကတည်းက သူယူလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ အတူ သူ့ဘ၀ကို သူ...အမြတ်တနိုးထိန်းသိမ်းနေတုန်းဖြစ်ကြောင်း...။
ုမြန်မာလို သူ့ရဲ့ သီချင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းခံစားနိုင်ပါတယ်..
မြန်မာ...ပြည်သူလူထုတွေ...သေနတ်ပြောင်းတွေရဲ့ ...ရှေ့ မှာ...ရင်ဆိုင်
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, December 15, 2009
မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ကောင်းတယ်။ မန်ကျည်းယို၊ ဇီးယို၊ မက်မန်းပေါင်း၊
ဂွေးသီးချဉ်စပ်၊ ရှောက်ပေါင်း ဘာစားမလဲ စားချင်တာစား။ လက်တွန်းလှည်းထဲထည့်
အဖုံးမပါ ဘာမပါနဲ့ လေဓာတ် ရေဓာတ် နေဓာတ်ကို သဘာဝကျကျ ရယူထားတဲ့ မြန်မာကြိုက်
သွားရည်စာလေးတွေ။ ဘာ မဆလာတွေသုံး၊ ဘာ အရောင်တင်မှုန့်တွေသုံး၊ ဘာ ငံပြာရည်တွေ
ချဉ်ငန်စပ် ရောင်းနေတဲ့လူရဲ့ ချွေးစက်တွေတောင်
ပါချင်ပါဦးမှာ။ ဘယ်လောက် သဘာဝနဲ့ နီးစပ်သလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာ ရလို့လား။
တွေဝေမနေနဲ့ တရုတ်တန်းသွား တုတ်ထိုးလေး စားကြည့်လိုက်ဦး။ ဝက်တစ်ကောင်လုံး
အမွှေးတောင် စားမရလို့ ချန်ထားရတာ။ ဘာနဲ့ သေလို့ သေမှန်းမသိတဲ့ ဝက်တွေလည်း
ပါချင်ပါဦးမှာပဲ။ အရသာ ရှိလေစွ။ မနေ့က တနေ့က ရောင်းမကုန်တဲ့ အသားတွေလည်း
ရောထည့် မူးမူးနဲ့ တွယ်သာ တွယ်လိုက်။ ဘာမှတောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
တုတ်ထိုးစားပြီး အဆီတစ်နေရင် လမ်းဘေးက ဖျော်ရည်လေး ဝယ်သောက်လိုက်ဦး။
ဟိုကိုင်ဒီကိုင် ကိုင်ထားတဲ့ လက်လေးနဲ့ အားပါးတရ ညှစ်ဖျော်ထားတဲ့ သံပုရာသီး
ဖျော်ရည်လေးကို ဘာရေနဲ့ လုပ်ထားမှန်း မသိတဲ့ ရေခဲနဲ့ ခပ်ဆဆမွှေ၊
အခါတစ်သောင်းလောက် ဆေးထားပြီးသား ခွက်ဆေးရည်နဲ့ ဆေးထားတဲ့ ဖန်ခွက်မှာထည့်။
မော့ပေရော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်။ တော်ပြီလား ကြံရည်လေးလည်း သောက်သွားဦး။
ယင်ကောင်ကတလောင်းလောင်းနဲ့ အဖတ်စစ်တဲ့ အဝတ်က ဘယ်နှစ်ရက် မလျှော်ဘဲထားတဲ့
လက်နှီးစုတ်မှန်း မသိဘူး။ ကြံတွေ ဘယ်က ယူလာသလဲ ဆိုတာလည်း ကြည့်လိုက်ဦး
ခြေနင်းပတ်မှာ ပိုးလိုးပက်လက်။ မြေဓာတ်ကို အပြည့်အဝ ယူထားတာ။ ရလား စင်္ကာပူမှာ။
ကြာပါတယ် အဆင်ပြေတုန်း လက်သုပ်စုံလေးပါ ဆွဲလိုက်။ ကားတွေက ဘေးနားမှာ တဝီဝီ၊
လက်တဝါးစာ ထိုင်ခုံပေါ်က ကျွံထွက်နေတဲ့ဖင် ကားနဲ့ မချိတ်မိရင် ကံကောင်း။ အမယ်
ငရုတ်ဆီတွေများ ဘယ်သူက တားထားထား စားနေကြတာက တရွှဲရွှဲနဲ့ နီရဲနေတာပဲ။
နယ်ဖတ်နေတဲ့ လက်ကြီး ကြည့်ပြန်တော့ ဂျုံနယ်သမား လိုပဲ။ တခါနယ်ပြီးတိုင်း
ပလုံဆို ဘေးနားက ရေပုံးခပ်စုတ်စုတ်ထဲ လက်ကို ဆင်းစိမ်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးရင်
ဂျီးဗလပွနဲ့ လက်နှီးစုတ်ကို သုတ်တယ်။
ကံကောင်းရင် အန်တီ နှံ့နှံ့လေး
နယ်ပေးနော်။ ဒါမှ စားကောင်းတာဆိုတဲ့ သောက်ပျင်းထူထူ မိန်းမတွေကို
စားရင်းသောက်ရင်း ငေးလို့ရသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲလိုနေရာတွေ သိပ်ကြာကြာမနေနဲ့။
လူဗွက်ပေါက်နေတဲ့ လမ်းတလျှောက် ကြော်လှော်နေကြတဲ့ ဆီပူအိုးတွေ
ဆီပူအိုးတွေဆိုတာ။ ဖိုင်နယ်ဒစ်စတီနေရှင်း နောက်ဆက်တွဲတွေ မြန်မာပြည်မှာ
ရိုက်ကောင်း ရိုက်နေရဦးမယ်။ အိမ်ပြန်တဲ့အခါလည်း လမ်းလျှောက်ပြန်ဖို့တော့
မစဉ်းစားနဲ့။ ကားပေါ်ကနေ ပြစ်ခနဲ ထွေးလိုက်တဲ့ ကွမ်းသွေးတွေ သလိပ်ဖတ်တွေ
ထိနေမယ်။ လိုင်းကားလေးနဲ့ပြန်။ ကားနဲ့ ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဟိုဟိုဒီဒီ
လျှောက်မကိုင်နဲ့ဦး၊ သူများရဲ့ ပီကေဖတ်တွေ၊ ချွဲတွေ လက်မှာ ပေကုန်မယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ညဘက် အင်စတန့် ကော်ဖီလေးလည်း သောက်လိုက်ဦး။ ဘာဓာတ်တွေ
ဘယ်လိုအချိုးနဲ့ ပါနေမှန်းတော့ မသိဘူး။ သောက်ကောင်းတာပဲ။ သေကာမှ သေရော။
ကြော်ငြာထားတာတွေကလည်း အလွန်။ မျိုမချပါနဲ့ ငုံထားပါ ဆိုလား ဘာလား။ ထားတော့
ကော်ဖီမကြိုက်ရင် ဘီယာဆိုင်သွား။ အိမ်မှာနေလဲ မီးပျက်နေမှာပဲ။ မထူးဘူး
လင်းလင်းချင်းချင်း ရှိတဲ့ ဘီယာဆိုင်လေးသွားပြီး အချိန်ဖြုန်းလိုက်။ တစ်ခွက်
၇၀၀ သောက်လိုက်စမ်းပါ ၆ခွက်လောက်တော့။ ဘာအရေးလဲ။ အသားကင်တွေ စားရင်
ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒတွေပဲ ဖြစ်မှာပဲ။ ဒီတော့ ဝက်နံကင်လေး၊
ကြက်ဖင်ဆီဖူးကင်လေး၊ ငါးကင်လေး နဲ့ ဆွဲပစ်လိုက်။ အချိန်မတော် ပြန်လာလို့ အိမ်က
တံခါးမဖွင့်ပေးဘူးလား။ အနှိပ်ခန်း သွားအိပ်လို့ ရသေးတယ်။ မှိုလိုပေါက်နေတာ
ဘာအရေးလဲ။ ဝါသနာပါရင် ဝါသနာပါရင်.. အင်း အခန်းထဲ ထမင်းဟင်း မှာစားလို့
ရသေးတယ်လို့ ပြောမလို့။ ကဲ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး စာအုပ်လေးဖတ်ရင်း
ခံတွင်းလေးဟာလာရင် လက်ဖက်သုတ်လေး ဝါးချင်ဝါးလို့ ရသေးတယ်။ အောင်မလေး ဆိုးဆေးတွေ
စိမ်ဆေးတွေဆိုတာ အခုမှ ကြောက်နေကြတာ ကိုယ့်လူ။ တမြန်နှစ်က ကျုပ်ကြီးတော်ကြီး
သေတုန်းက ဘာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဒီလိုပဲ ဘာမှ မသိသေးတော့ သေရိုးသေစဉ်ပေါ့။
မြေချတော့တောင် သူကြိုက်တတ်တဲ့ လက်ဖက်လေး ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။
လက်ဖက်သားလေးတွေဆိုတာ ဝင်းလို့။ အညွန့်လေးတွေဆိုတာ တောင့်လို့ ကော့လို့။
အလောင်းပြန်တူးပြီး တရားစွဲရ အခုဆို နိုင်ချင်နိုင်ဦးမှာပ။ ဘာအရေးလဲ။
ကိုယ်ကြိုက်တာလေးစားပြီး သေသွားတာ ကျေနပ်စရာကြီး မဟုတ်ဘူးလား။ နိုင်ငံခြားမှာ
အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ စည်းကမ်းတွေက တင်းကျပ်၊ စနစ်တွေက မြင့်မား
ခင်ဗျားတို့ စားချင်တာ စားရလို့လား။ တစ်နေ့ထမင်း တစ်နေ့ဟင်း ကိုယ်တိုင်
Wet Market ဆိုတာကို ဗွက်မားကတ်လို့ နာမည်တော့
တလွဲတွေ လာမပေးကြနဲ့။ သားဈေးငါးဈေးသွားတာ ဟန်လုပ်ဖို့မှ မလိုတာ။ အသက်လေး
အောင့်တတ်ရင် ခြေဖျားလေးထောက်ပြီး သွားတတ်ရင်၊ နားသည်းခံနိုင်ရင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်
အကုန်ရတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ရွှေနိုင်ငံလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ကောင်းတယ်။
ဆက်ရေးချင်ပေမယ့် မီးပျက်နေလို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်တယ်။ ဒါလေးဖတ်ပြီး
မြန်မာပြည် ပြန်လာချင်စိတ်တွေ ပေါက်သွားရင် ချက်ချင်းသာ ပြန်လာခဲ့။
သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတာ ရှိပါတယ်။ ဘာတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်အတွက်
မပူနဲ့တဲ့။ အင်း နာဂစ်မှာ သေသွားတဲ့ လယ်သမားတွေ အများကြီးပဲ။
ဆီလီကွန်ဗဲလီကအလုပ်ပြုတ်လာလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စင်္ကာပူ ကနေ အပြီးပြန်လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
လယ်ထဲဆင်းပြီး ကောက်စိုက်လို့ ရနေသေးတာပဲ။ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွတဲ့။ ဒါတွေလည်း
အလုပ်ပဲလေ။ အဲအဲ တစ်ခုပဲ ဝင်လာရင်တော့ 10% လေး ဆောင်ဖို့သာ ရှာလာခဲ့။
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် အမှုပတ်နေမယ်။ ဒါက ကွိုင်ရှိတယ်လေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
kyi toe ရှယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, December 12, 2009
အို ဘယ့်.. ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
Webometrics ရဲ့ ၂၀၀၇ခုနှစ် နှစ်လည်ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၁၀၀ ကို ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်မျက်စိကိုယ်ပင် မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားရတာကို ၀န်ခံပါရစေ။
အခု ၁၀၀ ထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံက တက္ကသိုလ် ၄၁ခု၊ မလေးရှားက ၁၈ခု၊ အင်ဒိုနီးရှားက ၁၄ခု၊ ဖိလစ်ပိုင်က ၁၃ခု၊ စင်္ကာပူနဲ့ ဗီယက်နမ်က ၇ခုစီ ပါဝင်တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်များကို မဆိုထားဘိ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တောင်မပါဘူး။
တစ်နှစ်ကို ၂ ကြိမ် ၂၀၀၄ခုနှစ်ကတည်းက စဉ်ဆက်မပြတ် စီစစ်တည်းဖြတ်လာတဲ့ အထက်ပါ စစ်တမ်းဟာ တက္ကသိုလ် အလိုက် ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာ သတင်းအချက်အလက်များ၏ အရည်အသွေးကို အဓိက ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ လက်တွေ့ပြုလုပ်နေတဲ့ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ နိုင်ငံတကာအဆင့် သုတေသနလုပ်နိုင်မှု၊ သင်ကြားမှု အရည်အသွေး၊ နည်းပညာ ဖလှယ်မှု၊ အလုပ်အကိုင် ချိတ်ဆက်ထားရှိမှု စတဲ့ ကိစ္စရပ်များကို တပြေးညီ အင်တာနက်စာ မျက် နှာ မှာ လွှင့်တင်ထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း အဆိုပါ စပိန်အခြေစိုက် သုတေသနအဖွဲ့ မှ အကြံပေးထားတယ်။
ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ဆင်ဆာမဖြတ်ဘဲ ပြောရရင် … အမိမြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်အားလုံးကို မဆိုထားပါနဲ့အုံး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုဘဲ ဦးတည်ပါစို့။
“အို… ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် …t
မင်း .. အိပ်ပျော်နေတာလား၊ အိပ်ချင်ဟန်ဆောင်နေတာလား၊တမင်တကာ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာလား၊
မင်းကိုယ်မင်း ဆန်းစစ်ဖို့ လိုနေတယ်ကွ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးကို မကြည့်ပါနဲ့အုံး
တို့ အရှေ့တောင် အာရှ ၁၁ နိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါအုံး
မင်း မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်လည်း သိဖို့ တန်ပါပြီ
ကမ္ဘာကြီးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရွာကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတာ မင်းနားလည်ဖို့တန်ပါပြီ
၁၉၄၀-၅၀ နှစ်များဆီက အရှေ့တောင်အာရှ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို မမေ့တန်ကောင်းပါဘူး
ဒီတသက် ခေါင်းမချခင်မှာ မင်းဆီမှာ စတေးခဲ့ရတဲ့ တို့ဘ၀တွေကို အများက ဂုဏ်ယူစရာ၊ အတုယူစရာဖြစ်အောင်
ထို့အတူမင်းကြုံတွေ့ရမဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့….”တို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကွာ။
အဆင့် ၁ မှ ၂၀ ရှိ အရှေ့တောင်အာရှ တက္ကသိုလ်များ၏ အဆင့်အတန်း
1 National University Of Singapore - Singapore
2 Nanyang Technological University - Singapore
3 Kasetsart University - Thailand
4 Chulalongkorn University - Thailand
5 Prince Of Songkla University - Thailand
6 Asian Institute Of Technology Thailand - Thailand
7 Chiang Mai University - Thailand
8 Thammasat University - Thailand
9 Assumption University Of Thailand - Thailand
10 Khon Kaen University - Thailand
11 Mahidol University - Thailand
12 Gadjah Mada University - Indonesia
13 Institute Of Technology Bandung - Indonesia
14 Universiti Sains Malaysia - Malaysia
15 Universiti Teknologi Malaysia - Malaysia
16 Multimedia University - Malaysia
17 University Of The Philippines Diliman - Philippines
18 Universiti Putra Malaysia - Malaysia
19 University Malaya - Malaysia
20 King Mongkut's Institute Of Technology Ladkrabang - Thailand
စင်ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမယ် သူဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ကမြန်မာပြည်က ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကိုကြည့်ပြီး သိပ် အားကျခဲ့တာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာ ငါတို့နိုင်ငံမှာ ဆိုရင်ဘယ်လောက်များကောင်းလိမ့်မလဲ........
ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာသာ ဘွဲ့ယူခွင့်ရရင် ဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းလိမ့်မလဲ....တဲ့
စင်ကာပူမြို့တော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါ ငါတို့ Burma က Rangoon City ကို သူတို့ရဲံ ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်
လာရောက်လေ့လာပြီးတော့မှ Rangoon City ရဲ့ ပုံစံကို အခြေခံယူပြီး singapore ကို တည်ဆောက်ခဲ့တာဘဲလေ......
ထိုင်း ဘတ်ငွေ ၂၅ ဘတ်က Burma ငွေ တစ်ကျပ် တဲ့
အခုတော့ ထိုင်း တစ်ဘတ် က မြန်မာ ငွေ ၃၅ ကျပ် ဖြစ်သွားပြီ...
ဘားမား ဘောလုံးအသင်းက မာဒေးကားမှာ ( အရှေ့တောင်အာရှ နှင့် အာရှ ထိပ်တန်းအသင်းများပါဝင်)ဆိုဘားမားဘောလုံး အသင်းရဲံ အောင်မြင်မှုကို အရှေ့တောင်အာရှ က ဘယ်အသင်း မီမှာတဲ့လဲအာရှမှာ ချန်ပီယုံဖြစ်ခဲ့တာတွေက ပုံပြင်တွေလား
ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးမှာ Burmese တစ်ဦးရဲ့ သြဇာကမ္ဘာကို လွမ်းခဲ့တာတွေ..........
အခုတော့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဆိုရင် ....မျက်လုံးစိမ်းတွေနဲ့
မယားတောသူ.........ကျွန်မှာကုလားတဲ့burma မှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေတို့ ဘားမားတွေ သူတို့ကို အိမ်သာဆေးခိုင်းတာတို့ဘားမားတွေ အင်္ဂလန်သွားတယ်ဆိုတာက ပညာတော်သင်..ပညာရှင်အဖြစ်နဲ့အခုတော့........မောင်
မလေးမှာ အိုးတိုက်မှာလား စလုံးမှာ စားပွဲထိုးမှာလားဒူဘိုင်းမှာ တွင်းတူးမှာလား
Burma ဆို OK
U Aung San ဆို Right
U Thant ဆို Right
U Nu ဆို Right
အို so sorry.
I m stupid.
I m not Burma.now.
I m Myanmar.
Burma dead with her beauty.
နို့ဘိုးဒုက္ခသည် စခန်းတနေရာ။ ထိုင်းနယ်စပ်။
လူ့ဘောင်သစ် ဒေသ (၂) တောင်ပိုင်စခန်း။
တဲ..အိမ်တွေမှာ မိသားစုအပါအ၀င် ရဲဘော်တွေစုနေကြတယ်။ အဲတုံးက ပါတီမှာ ခလေးငယ်ငယ်တွေရှားတယ်။ တစ်စု..နှစ်စုပဲရှိကြတယ်။ အတော့်ကိုပျော်စရာကောင်းတယ်။ အားလုံးစုပေါင်းချက်၊ စားကြတယ်။ စုပေါင်း သောက်ကြတယ်။ ဘုံ...ပျော်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့။
ဒီအချိန်မှာ ၉၉၉၉ လေးလုံးစတယ်။
ဒီအေဘီကနေ စစ်ဆင်ရေးအတွက် အားလုံးလုပ်ကြတယ်။ အဖွဲ့တွေအားလုံး KNU တပ်မဟာ ၆ မှာ စစ်ဆင်ရေးဆင်းကြတယ်။ လူ့ဘောင်သစ် ဒေသ (၂) ကို ဗဟိုကော်မတီဝင် ကိုအောင်ကျော်စိုး၊ တပ်မှုး ကိုမောင်မောင်ဦးတို့ကနေ ဦးစီးပီး စစ်ဆင်ရေး၊ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှု့ ကို မဟာမိတ်တွေနဲ့ ထွက်ကြတယ်။
စခန်းကနေ..ကြာအင်းဆိပ်ကြီးထိ သုံးပတ်လောက် လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ အခက်အခဲအမျိုးအမျိုးကြားကနေ။ ရန်သူသတင်းနားထောင်၊ တွေ့ရင်ပစ်၊ ဒီလိုနဲ့ ရှေ့ တမ်းစခန်းကိုရောက်တယ်။
ကရင်ဗုဒ္ဒဘာသာတွေနေကြတယ်။ ကရင်က တပ်မှုးတွေလည်း ရှိတယ်။ အေဘီက ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီး။ ရဲဘော်ရဲဘက် ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ အကျိုးအမြတ် မရှိ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတယ်။ ခွေးသားစားလည်းအတူတူ....ချီးကျလည်းအတူတူ။
နှစ်အိမ်ရောက်တော့...ကိုယ်နေမဲ့နေရာ..ကရင်အိမ်တစ်အိမ်မှာ ပါတီကရဲဘော်တွေကို ကိုမောင်မောင်ငြိမ်း (ဒု-စစ်ကြောင်းမှုး) က နေဖို့တာဝန်ပေးတယ်။ စစ်ကြောင်းမှုးက KNU က။
ဒီလိုနဲ့စစ်ကြောင်းထွက်ရင်း တနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့...ပါတီ ဒေသ(၂)တပ်မှုး ကိုမောင်ဦး(ယခုအမေရိက)က ထမင်းအိုးထမ်း၊ ဆန်ကြိုးလွယ်ရင်း၊ ရဲဘော်တွေနဲ့အတူ၊ အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး သူ့စကားပြောစက်က နအဖ စစ်ကြောင်းတွေကို ချေမှုန်းရေးလုပ်တယ်.။ ..........-ီးပဲတဲ့...။ မှတ်မိတုံးပါ။
သူ့ရဲ့ ခလေး တစ်နှစ်သားကို မိန်းမနဲ့ စခန်းမှာထားပြီးရှေ့ တန်းကို တနှစ်နီးပါး တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ထမ်းတယ်။ လစာမရ၊ ပင်စင်မရှိ၊ ဘာကိုမှမျှော်လင့်ချက်မရှိပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ မပြုတဲ့သူတွေကတော့ ဘော...ပဲလို့ပြောရတော့မယ်...။
ရှေ့ တန်းကအပြန်မှာ ရဲဘော်တွေစားတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာ တပ်မှုးတပ်သားတွေဝိုင်းပြီးအတူတူ ၊၊ မှုးလည်းအတူတူ.။
..တော်လှန်ရေးမှာ ဘယ်သူမှ ငါ..တပ်မှုး..၊၊၊
အားလုံးဟာ တပြေးညီ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြတယ်ဆိုတာကိုပါ....။
တော်လှန်ရေးမှာ Overtime ကြေးမရှိပါဘူး။
စွန့်လွှတ်မှု့ကို အရင်းတည်ပြီး ဒီမိုကရေစီရဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ကြတာပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, December 10, 2009
ဒီလိုမျိုး တပ်ထဲက သူရဲကောင်းတွေများများပေါ်ပါစေ
မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစုက အသက် (၆၀) ကျော်လည်း တပ်က ထွက်စရာမလိုပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေဆိုရင် သေခါနီးထိ အာဏာယူထားတုံးပါ။ တပ်ကထွက်တာတာနဲ့ သူ့လည်း ကား...မယ် ဆိုတာ သူသိတယ်ထင်တယ်။
အောက်ခြေတပ်မှုးတပ်သားတွေကြတော့ ၆၀-ပြည့်တာနဲ့ပင်စင်ယူ။ တပ်ထဲမှာ အောက်ခြေကအဆင့်တွေ ငတ်နေပြီ၊ သူတို့ကို မကြိုက်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်း သိပုံရတယ်။
တပ်ထဲက သူရဲကောင်းတွေဟာ ဆိုးသွမ်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစုကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပြီး အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာလွှဲပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်း မကြာခင် ကြားရတော့မယ်။
အခုလည်း လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က သူရဲကောင်းတပ်မှုးတစ်စုကြောင့် နအဖ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အချို့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားခဲ့ပြီ။ ထိုကဲ့သို့သူရဲကောင်းများ များများပေါ်ထွက်ပါစေ။ ထိုသူတို့ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီး၊ တိုင်းပြည်ကို လူမိုက်လက်ထဲကနေ အမြန်ကယ်တင်နိုင်ပါစေ။ ထိုသူတို့ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
လေးစားပါတယ်...။ သူရဲကောင်းတချို့ မှာ...အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဥရောပရေးရာဌာန အကြီးတန်းစာရေး ကိုသူရကျော် နှင့် ကိုပျံစိန်
ဗိုလ်မှုးချုပ် စိုးလွင် (စက်လက်နက်)
ဗိုလ်မှုးချုပ် သန်းရွှေ (ခဲယမ်း)
စံခ မှ မဲ့ဆောက်သို့...
ပြေးဖို့အတွက် အမိန့်ကျတော့ ပြေးပြီ။
ပြေးဖို့အတွက်ကို ဒီလိုစီမံတယ်။ စခံမှာလည်း ဆက်နေလို့မရတော့ဘူး။ ဗျူဟာမှုး တွေတော့ မသိဘူး။ အနီးစပ်ဆုံး ဒု-တပ်မှုးနဲ့နေရတော့ သူပြောတာကို နာခံရတယ်။ ကျနော်တို့နေတဲ့နေရာက မွန်ဘက်ကမ်း၊ ၀င်းကလို့လည်းခေါ်တယ်။ အိမ်တစ်အိမ်၊ ဈေးပေါ်ဆုံးအိမ်မှာတခုမှာ ငှားပြီးပုန်းကြတယ်။ အပြင်လည်းမထွက်ရဲဘူး။ သိမှာစိုးလို့။ ကျနော်က ၀ိမလိုင်တောစပ်ကနေ မိန်းမရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် ရာထူးတိုးပြီး ဒု-တပ်မှုးနဲ့အတူနေရတယ်။ ကံတော့ကောင်းတယ်။ ဒုက္ခကိုအကြာကြီးမခံရဘူး။
ဒု-တပ်မှုးက တနေရာ၊ တပ်မှုးကြီးတနေရာ။ ဖုန်းတော့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမြင်မတူဘူး။ တပ်မှုးကြီးက ဆက်လက်ခုခံရေး။ ဒု-တပ်မှုးက မဲ့ဆောက် ဗဟိုနဲ့ပေါင်း စည်းရေး။ ဒါကို ဗဟိုကလည်းသဘောတူတယ်။ ဘုရားသုံးဆူကနေ မြ၀တီကို လာဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ နောက်ဆုံးညှိကြရင်း ဗဟိုတည်ရှိရာမဲ့ဆောက် ကို သုံးဆူကနေ လမ်းလျှောက်ကြမယ်ပေါ့။ တောလမ်းကနေ။ KNU စိုးမိုးရာဒေသထဲ ကနေ။
တောင်ပိုင်း လူ့ဘောင်သစ်တပ်မှုးဆိုတာကလည်း ကွမ်းစားတာကလွဲလို့ အရမ်းရိုးတယ်။ ဒု-တပ်မှုးကလည်း တော်တော်ထက်တယ်။ ဘယ်သူကိုမှ ဗိုလ်မထားပဲမှုးတဲ့အတွက် ကြောင့်။ ဒီလိုနဲ့ တောင်ပိုင်းကနေ၊ မြောက်ပိုင်းဗဟို ဌာနချုပ်ကို ချီတက်ကြမယ် ဆိုပီး၊ KNU နဲ့ချိတ်တယ်။ KNU က ရဲဘော်တချို့ ကနေ အဆက်အသွယ်ရတယ်။ နာမည်ကတော့ ကိုနိုင်ပါ။ တပ်ရင်း ၁၆ က။ ဒီလိုနဲ့ ဇယားတွေဆွဲကြတယ်။ ဗဟိုက စီမံတဲ့လူကတော့ အခု အမေရိကမှာရှိတဲ့ ကိုအောင်ကို။
မပြေးခင်မှာ စကားအနည်းငယ်ခင်းချင်တယ်။ တောင်ပိုင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို စဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ ဆလိုင်းကိုကိုဦးရှိတယ်။ သူက အလည်လာတဲ့အချိန်။ သူအလည်လာ ရင်း ဖမ်းတဲ့အချိန်နဲ့တွေ့တော့ ပေါ်တာဖြစ်သွားတယ်။ ကျနော်နဲ့ ကိုငယ်ထွေးက ထမင်း ချက်၊ သူက အချုပ်ထဲကို ထမင်းပို့တဲ့ ဆက်သားပေါ့။ သူ့မှာက US Passport ရှိတော့ ထိုင်းတွေဖြုံတယ်။ ဖမ်းတဲ့အချိန်တိုင်း ကျနော်က အပြင်မှာရောက်နေတယ်။ ဘယ်တော့မှ အဖမ်းမခံခဲ့ရဘူး။
စံခက-မဲ့ဆောက်ကို ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကျတော့ စစ်ထွက်ပြီပေါ့။ အိမ်ကမိန်းမကို မှာစ ရာရှိတာမှာတယ်။ ၀ယ်စရာရှိတာ ၀ယ်တယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ၀မ်းနည်းစရာ။ မိန်းမတွေကို အပေါ်လမ်းက ထိုင်းထောက်လှမ်းရေးကားနဲ့တဆင့် မဲ့ဆောက်အရောက် ပို့ပေးမယ်။ ယောက်ျားတွေကတော့ လမ်းလျှောက်ပေ့ါ။ ကောင်းပါတယ်။ ထောက်ခံတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို။ ဒါပေမဲ့ တခုစဉ်းစားမိတာက ဘာ့ကြောင့်များ ကျနော်တို့ကို ဒုက္ခခံပြီး လမ်းလျှောက်ခိုင်းရတာလဲပေါ့။ မလိုအပ်ဘူးလေ။ ငွေလည်း သိပ်မှမကုန်တာဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ လမ်းလျှောက်ကြတယ်။
စံခကနေ KNU နယ်မြေဖြတ်ဖို့ဆိုတာ ဘုရားသုံးဆူမြို့ တခုလုံးကို ဖြတ်မှဖြစ်တယ်။ KNU က ကိုနိုင်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ သုံးဆူကို ညနေပိုင်း သေနတ်မပါပဲဖြတ်တယ်။ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ သမားကတော့အဆင့်သင့် စီစဉ်ထားတယ်။ သူကမောင်းတယ်။ မက်ကသာအထိပေါ့။
ပထမဆုံးစဖြတ်တော့ ဘယ်သူအရင်သွားမလဲ။ ကိုငယ်ထွေး၊ ကိုဝဏ၊ ဒု-တပ်မှုး၊ ဘုန်းကျော်။ အားလုံးပေါင်းလေးယောက်ရှိတယ်။ ဘယ်သူမှ အရင်မဖြတ်ဘူး။ ကျနော် သွားတယ်။ ကြောက်လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ ဆိုင်ကယ်နောက်မှီးကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်က အရေပြားလှန်တာတောင် သတိမထားမိဘူး။ သုံးဆူ ရဲစခန်းကိုဖြတ်တယ်။ ပြီးတော့ စာသင် ကျောင်း၊ ပြီးတော့ လူနေအိမ်တွေ။ မိလို့ကတော့ အသေပဲ။ လူနေအိမ်တွေကျော်တော့ နာရီဝက်လောက် ဆိုင်ကယ်သမားဖြတ်တော့မှ မက်ကသာဂွင်ရောက်တယ်။ KNU ဂိတ် တွေ့တော့ စိတ်အေးရတယ်။ နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့သူတွေက ကိုငယ်ထွေး၊ ဒု-တပ်မှုးနဲ့ ကိုဝဏ။ ဆိုင်ကယ်ကိုအတူတူစီးလားကြတယ်။ ဒါနဲ့စဉ်စားမိတယ်။ သေရင်တော့ ကိုယ်က အရင်ဦးအောင်သေရမယ်လို့။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, December 02, 2009
စံခ မှ မဲ့ဆောက်သို့ (အပိုင်း-၂)
အင်းပေါ်က ဖောင်အိမ်တွေမှာအလည်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် Service အပြည့်ရှိတယ်။ လူကိုယ်တိုင် သွားစရာမလိုဘူး။ ဖုန်ဆက်လိုက်ရမလား သီချင်းထဲကလို။ ဘာစားမလဲ၊ ဘာသောက်မလဲ၊ ကြိုက်တာမှာ။ ပြီးရင် တော့ငွေပေး။ အစုံရတယ်...။ ကောင်မလေး ချောချောလည်းရတယ်။
မထမဆုံး ထိုင်းတပ်က ဗိုလ်မှုးကြီးလာပြောတော့ နေရာရွှေ့ ဖို့ပြင်ရပြီ။ ဒီမှာပဲ တောင်ပိုင်းဒေသ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ နာမည်ကြီးအဖွဲ့တွေ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးထိုင်ကြတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့...။ နောက်ဆုံး တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အရေးပေါ်ကြော်ငြာချက်ထုတ်ပြီး လုပ်ရတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ ပြေးကြဟေ...့ လွတ်ရာ၊ ကျွတ်ရာ။ ဒါပေမဲ့ပြေးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပြေးမလဲ...။ စနစ်တကျပြေးရေး။ လူထုကြားထဲမှာ ပြောက်ကျားနည်းအရ နေထိုင်းကြမလား။ဒီအတွက် အေဘီ၊ လူ့ဘောင်သစ်၊ ပီဒီအက်ဖ်၊ NLD-LA က တောင်ပိုင်းဒေသ တပ်မှုးတွေဟာ တဆင့်မြင့် ရာထူးတိုးကြတယ်။ အားလုံးဗျူဟာမှုးအဆင့်ဖြစ်သွားကြတယ်။
ဗျူဟာမှုးတွေရဲ့ဌာနချုပ်ကို အင်း....ပေါ်က ဖောင်အိမ်တွေပေါ်ကနေ....ကွပ်ကဲကြတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ပိုပြီး အန္တရာယ်ကင်းတယ်ပေါ့။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ရန်သူတွေက အပြည့်နဲ့ဆိုတော့ ရေပေါ်မှာ ဖောင်စီးတာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပေါ့။ ဖောင်အိမ် တွေဆိုတာ အလကားမရဘူး။ ငှားခ တစ်ရက် အနည်းဆုံး ထိုင်းဘတ်ငွေသုံးရာပေးရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဗျူဟာမှုးတွေ ဖောင်အိမ်တွေပေါ်ကနေ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေကို ကွပ်ကဲတယ်ပေါ့...။ မောင်ဘုန်းကျော် ဘယ်ရွှေ့ ၊ ဒု-တပ်မှုး ညာရွှေ့ ။ ရဲဘော်ကြီးတွေ ကင်းစောင့်စေ။ စသဖြင့်...စသဖြင့်...။
တောင်ပိုင်းဒေသ လူ့ဘောင်သစ်ဌာနချုပ်အကြောင်းနည်းနည်းရှင်းပြမယ်။ ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကြလဲဆိုတာ။ ဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတာ။ ကျနော်တို့စံခ ရုံးမှာ အားလုံးဗိုလ်တွေချည်းပဲ။ ရဲဘော် တစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။ သူကလည်းဗိုလ်သင်တန်းတက်နေတယ်။ အားလုံး ၁၀-ယောက်နီးပါးရှိတယ်။ မှီခိုအပါအ၀င်။ လုပ်ငန်းကတော့ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး။ အစည်းအဝေး၊ ကားပြင် (Workshop)၊ သင်တန်း၊ စာဖက်၊ ညနေ ဂလုပေါ့။ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ ရဲဘော်တချို့  ပီဒီအက်ဖ်စခန်းမှာ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှု့ ရှိတယ်။ စစ်သင်တန်း၊ နအဖရဲဘော်တွေ ဘုရားသုံးဆူအတက်အဆင်းကို လမ်းကနေ ချောင်းပစ်တဲ့လုပ်ငန်းရှိတယ်။ နှစ်ပွဲလောက်တော့ ချောင်းပစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ တော်တော်မလွယ်တဲ့အလုပ်ဗျ..။ ကျနော်တော့ စစ်တိုက်တာကို ကြောက်တယ်။ အရမ်းပင်ပန်းတယ်။ ဒါက စကားချပ်။ တောင်းပိုင်းလူ့ဘောင်သစ်ရုံးရဲ့ လုပ်ငန်းကတော့..ဒါပဲ။ သြော်...မေ့နေလို့...။ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရှိသေးတယ်။
ဗျူဟာမှုးတွေ ဖောင်စီးပြီး ကွန်းမန်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်....ရဲဘော်တွေ တောထဲမှာပုန်းရှောင်၊ နိုင်ငံတကာက မီဒီယာမှာ တောင်ပိုင်းဒေသအင်အားစုတွေကို လုံးဝဖမ်းနေပြီ။ ထိုင်းအစိုးရတော့ ရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီး နှိပ်စက်နေပြီ ပေါ့...၀ိုင်းအာကြတယ်။ အဲဒိအတွက် စာနာထောက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေ၊ လူတွေက ငွေတွေအတော် များများ ပိုပေးကြတယ်။ NCGUB အပါအ၀င်။ သနားလို့ပေါ့။ နောက်ဆုံးငွေတွေအများစုရောက်တာက ဗျူဟာမှုး တွေလက်ထဲကို။ သူတို့ကနေတဆင့် ရဲဘော်တွေလက်ထဲ ပြန်ဖြန့်ပေါ့။
ကျနော်နဲ့ ရဲဘော်ကြီး ကိုဝဏ၊ ကိုငယ်ထွေး၊ ဦးမင်းကြည် တို့က ၀ိမလိုင်လို့ခေါ်တဲ့တောစပ်က တဲလေးတစ်ခုမှာ ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့အတွက် တာဝန်ကျတယ်။ တဲဘေးမှာက စမ်းချောင်းတခုရှိတယ်။ ငါးဖမ်း၊ ခရုကောက်၊ တော ထဲက အပင်တချို့ ကနေ တို့စရာရတယ်။ တော်တော်တော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗျ...။ ဒီအချိန်မှာ ပါရမီဖြည့် ဘက် ကျနော့်မိန်းမက ဒီတဲ....အထိကို လိုက်လာသေးတယ်။ ဘုန်းကျော်တို့ မပြေးခင်မှီအောင်လို့ထင်တယ်။ ကျေးဇူးပါ...ကိုအောင်ဆန်းညွှန့် နဲ့ မနီ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာမပါသေးတဲ့ ဆလိုင်းကိုကိုဦးကို နောက်ဇာတ်လမ်းမှာ ထည့်ပေးပါ့မယ်။ နောက် ဒု-တပ်မှုး ဗိုလ်မှုး သိန်းလွင်နဲ့ဇနီးလည်း ကျန်ပါသေးတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, December 01, 2009
အမေရိက ပါတီ ဌာနခွဲကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးဒီလိုပြောချင်တယ...
ယခုခေတ်ယူဂျီသမားသည်၊ ယူဖို့အတွက်ဂျီကျမည်၊ ဂျီကျပြီ...